Wararka - Sida Loogu Xullo Muraayadaha Qaabka Wejigaaga
Weligaa dhibaato malahan inaad isku daydo inaad ogaato nooca jir ku habboon wejigaaga? Hagaag nasiib baad ku jirtaa! Tilmaamaheena yar, waxaad ku baran doontaa inuu jiro qaab qof walba - waanan kuu sheegi karnaa waxa kugu habboon adiga!
Qaab noocee ah ayaan yeelayaa?
Waxay u badan tahay inaad leedahay mid ka mid ah qaababka wejiga soo socda: oval, square, round, heart, or diamond. Adoo muraayad fiirinaya oo aad si dhow u fiirinaya astaamaha wajigaaga, waxaad ku ogaan kartaa midka kugu habboon! Hoos ka aqriso si aad u ogaatid sida loo go'aansado nooca wajiga aad leedahay, iyo muraayadaha noocee ah inay kugu ekaadaan adiga.
Muraayadaha noocee ah ayaa ku habboon wajiyada Oval?
Noocyo badan oo muraayado kala duwan ah ayaa ku habboon wajiyada oval. Wejiga leh qaabka oval-ka wuxuu leeyahay dhabannado sare oo xoogaa ballaadhan oo waxyar ka yar cidhiidhsan xagga foodda hore. Qaabkan wajiga dheer ee wareegsan ayaa kuu ogolaanaya inaad iska siibto ku dhowaad nooc kasta - gaar ahaan wareegyada waaweyn iyo kuwa ballaadhan. Iyada oo leh qaab weji oval ah, xoriyad u yeelo inaad ku dhiirantahay midab madadaalo leh, muuqaal ama qaab qaabeed. Barxad, trapezoid, tortoise, iyo leydi - fursadaha waa kuwo aan dhamaad lahayn!
Taladayada kaliya ayaa ah in laga fogaado looxyada cidhiidhiga ah iyo looxyada leh walxaha naqshadeynta culus. Waxay ku dari karaan xoogaa dherer aan loo baahnayn wajigaaga oval.
Muraayadahahee Qaabeeya Muuqaalada Fagaaraha?
Noocyo badan oo kala duwan oo ah muraayadaha indhaha ayaa ku habboon wajiyada laba jibbaaran. Waa sinta inay noqoto laba jibbaaran! Haddii aad leedahay weji muuqaal laba jibbaaran leh, muraayadaha indhaha oo aad u tiro badan oo weyn ayaa soo jiidan kara astaamahaaga. Marka laga hadlayo saamiga, wejiyada laba jibbaaran ayaa ugu ballaadhan daamanka iyo foodda. Qaabkan oo lagu qeexay qadka daanka oo xoog leh, muraayadaha oo sanka ku fadhiisanaya ayaa ku daraya dherer wajiinaya wejigan.
Si aad diiradda ugu saarto astaamahaaga ugu adag, dooro mugdi iyo wareegsan, halkii aad ka ahaan lahayd xagal, qaab. Mashiinka muraayadaha muraayadaha wareega ah ayaa jilicsan doona sidoo kale wuxuu ku dari doonaa kala duwanaanta astaamahaaga xagalka, isagoo wajigaaga ka dhigaya mid muuqda Mashiinka aan qallafsaneyn iyo kuwa aan dusha lahayn waa meel fiican oo laga bilaabi karo.